Kunzima ukukhetha kuphela 5 Easy Day Trips Kusukela Milan ngu zemininingwane ukwabelana nawe. Inhlokodolobha yemfashini yase-Italy iyakhazimula ngezinketho zokuvakashela izivakashi. Akugcini nje egcwele imfashini, kodwa ine umlando Amazing, izakhiwo, futhi nezindawo ezinhle to write home about.
Easy Usuku Lokuvakashela lethu lokuqala Kusukela Milan iwukuba echibini lesithathu ngobukhulu e-Italy yosuku ngesitimela, futhi uhlangabezana cruise zikanokusho azungeze amanzi awo. Iyiphi indlela engcono ukuzwa emangalisa alpine kwenkundla kusukela Iminsalo isikebhe, kanye nokuthola ithuba qalaza hlala ngesikhathi enhle Waterside izakhiwo ku Ugu.
Ungase umangale ukufunda ukuthi Switzerland nje uhambo lwezinsuku kude dolobha Italy sika. Hop phezu Bernina Express kusukela Tirano futhi uzoba khona e ezimbili nje namahora nengxenye.
Uzogcina edolobheni Swiss of St. Moritz, omunye edume zokungcebeleka entabeni kakhulu Switzerland. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz kwenza isisekelo ephelele ukuhlola eningizimu we Canton of Graubünden. Akusona isizinda esihle usuku uhambo kwezinye izingxenye Switzerland, njengoba ezaziyokwenzeka kakhulu isikhathi sokuvakasha. Ikona, Nokho, omunye phezulu yethu 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane Nokho! Ngaphandle nightlife edolobheni, imisebenzi esemqoka lapha ingaphandle. Uma uthanda izintaba, ngebhayisikili, noma ezemidlalo ebusika, ongazijabulisa ngazo amasonto kule ndawo ezikwenza.
Ukugibela funicular kusukela phansi kuya phezulu edolobheni, futhi sibheke izikhumbuzo Bergamo okuphawulekayo, ezifana St. Maria Maggiore Cathedral kanye Colleoni Chapel.
Kugcine, kodwa hhayi okungenani, ungakhohlwa ukuthatha isikhashana ukwazisa indawo engakholeki yeBergamo, nge amagquma esisuka ahambe amakhilomitha, yonke indlela phansi Lake ezikude Como.
I Franciacorta esifundeni inikeza abanye umbukwane, iwayini eliwine umklomelo ongalikhetha, e phakathi okukhazimulayo kwenkundla Italy.
Le ndawo Franciacorta DOCG sakhiwe mayelana 3,000 amahektha emivini ahlanganisa indawo ethile enhle ngokumangalisayo eningizimu yeLake Iseo esifundeni sase-Italy Lombardy. Lena ngaphakathi amathe ibanga eziningi nezinye Italian abadumile iwayini izifunda, ezifana Piedmont entshonalanga Conegliano Valdobbiadene (ikhaya super-premium Prosecco) to the east.
Le ndawo prime kwenza Franciacorta indawo okuyiwa ephelele yokubaleka romantic noma kahle sifaneleka iwayini uhambo, uhambo nje lwehora ukusuka eMilan, it is accessible and beautiful in equal measure.
uhlu lwethu 5 Usuku Uhambo Kusukela Milan ngu zemininingwane ngeke ibe ephelele ngaphandle kuhlanganise Venice! Yini enye engcono kunalokhu ukuthatha uhambo lwezinsuku kusuka Milan komunye wemizi Italy sika romantic eyigugu, Venice? Yize kunzima ukulingana konke okuthokoziswa yiVenice osukwini olulodwa nje, ungakwazi nakanjani uzame.
Wena akungabazeki oqeqeshwe okungenazinkinga ngu echwebeni elikhazimulayo. Jabulela ukwakhiwa okuhle okumangalisa okunye kwe-Italy Emadolobheni amaningi athandwayo izivakashi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Easy Day Trips Kusukela Milan ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-milan-train%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Bergamo comolake Daytrips I-EuropeByTrain milan Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelvenice